Fananganana ny faritra faha-23: mangataka ny hiaraka amin’i Vatovavy ny any Ikongo - ewa.mg
Fananganana ny faritra faha-23: mangataka ny hiaraka amin’i Vatovavy ny any Ikongo
News - Fananganana ny faritra faha-23: mangataka ny hiaraka amin’i Vatovavy ny any Ikongo
Tsy mbola milamina ny
fametrahana ny faritra faha-23 eo amin’i Vatovavy sy i Fitovinany.
Nivory tao amin’ny « Tranobe satrokefa » ny 8 oktobra teo ny
taranaka Ravaloarivo, Ndrenony avy any Ikongo sy ireo ampanjaka avy
any Mananjary, Ambohitsara ary Nosy varika sy
Nambaran’izy ireo ta­min’izany fa
tokana i Vatovavy ary iray tsy mivaky ka nanaovan’izy ireo antso
avo ho ren-tany, ren-danitra amin’ny alalan’ireo ampanjaka ireo
izany. Nan­terin’izy ireo koa fa miaraka amin’i Vatovavy ny any
Na­morona, araka ny fangatahana nataon’ireo ampanjaka. « Matoky
izahay Andria­matoa filoha fa manana anao satria tato amin’ny
« Tranobe masina » no na­naovana fanambarana fa omena ny faritra
Vatovavy ny any Ikongo raha tafaverina amin’ny toerana ianao.
Hiaraka amin’Ikongo ny any Ifanadiana sy Nosy Varika. Tafiditra ao
anatin’izany koa ny any Namorona ary renivohitra kosa i
Mananjary », hoy izy ireo.
Tantara sy kolontsaina ary fomba…
Nanterin’ny fanambaran’izy ireo fa
tsy ampy ny fijerena ny fizaram-paritra ara-jeografia. « Ilaina ny
mijery lafin-javatra hafa sy marolafy. Tsy afa-misaraka amin’i
Vatovavy izahay raha ny tantara sy ny kolontsaina », hoy ihany ny
fanambarana. No­tanisaina tamin’izany fa mi­tovy ny fomba
amam-panao sy ny ara- drazana. Midika ny maha iray ka tsy azo
sarahina izany, araka ny nambaran’izy ireo hatrany. « Mitovy ny
otrikarena eo amin’ny distrika efatra : Harena an-kibon’ny tany sy
ny voly fanondrana. Tsy misy tombontsoanay mihitsy tamin’i
Fitovi­nany nandritra ny taona maro. Mety aminay ny miaraka amin’i
Vatovavy mba hampilamin-tsaina ny vahoaka. Hamafisinay fa miaraka
amin’i Vatovavy ny any Ikon­go…», hoy izy ireo. Nana­sonia izany ny
Ndre­nonibe, Razafimandimby Bertrand.
L’article Fananganana ny faritra faha-23: mangataka ny hiaraka amin’i Vatovavy ny any Ikongo a été récupéré chez Newsmada.
Anisan’ny delegasiona malagasy hanainga farany ho any amin’ny Lalaon’ ny Nosy, any Maorisy, ny ekipam-pirenena eo amin’ny taranja baolina lavalava. Miisa roa ambin’ny folo ireo mpilalao handeha hiaro ny voninahi-pirenena miaraka amin’ny mpitsara roa sy mpanazatra roa. Amin’ny 23 sy 24 jolay izy ireo vao hiatrika fihaonana. Hifandona avokoa ireo firenena efatra mandray anjara (Madagasikara, Maorisy, Mayotte, La Réunion). L’article Baolina lavalava est apparu en premier sur AoRaha.
Talenta vaovao: mitrandraka ny “zouk love” i Dyva
Toy ny ankamaroan’ny ankizy, tia mihira, raha fony mbola zaza, Razananoro Mireille William, tovovavy avy any Antsirabe, saingy lehibe tany Arivonimamo any. Tsy navelany ho nofinofy fotsiny izany, ankehitriny, na efa renim-pianakaviana aza izy. Tsy ela akory izay, tapa-kevitra ny vehivavy fa hiditra eo amin’ny tontolon’ny fihirana ka nisafidy ny anarana hoe Dyva, fitambaran’ny anaran-janany: Dylane Valerie. «Tsy ho hadinoko» ny lohatenin’ny hira voalohany navoakany, nosoratany sy namoronany feony. Anisan’ny nanampy azy tamin’ny famoahana io vokatra io ny Davalt Rwikordz. Mampiavaka an’i Dyva ny fanasongadinany ny gadona “zouk love”, saingy ao anatin’ny vinany ny hivelatra amin’ny mozika samihafa, araka ny nambarany. Tanjony mantsy ny hankafizan’ny sokajin’olon-drehetra ny zavakanto ataony ka tsy handalo fotsiny eo amin’ity sehatry ny mozika ity izy fa hiezaka hametraka ny tantarany sy ny maha izy azy, araka ny voalazany. Iray ihany aloha ny rindran-tsary na “clip” navoakan’i Dyva, saingy nambarany fa efa maromaro ny vazo efa vonona. Ao anatin’ny fanomanana ny famoahana vokatra vaovao indray ity mpanakanto ity ary miara-dalana amin’izany ny fampahafantarana sy ny fanaparitahana ireo.Randria. L’article Talenta vaovao: mitrandraka ny “zouk love” i Dyva a été récupéré chez Newsmada.
“Opération de ratissage” – Betongolo: mpifoka rongony valolahy tratra tao amin’ny “Ghetto”
Sesilany ny fitarainana ataon’ny mponina eny Betongolo momba ny fisian’ny trano iray atao hoe “ghetto”, araka ny fiantson’ireo olona sasany azy. Nambaran’ireo mponina eny an-toerana fa fivarotana sy fifohana rongony io trano io ka izay no mahavelon-taraina azy ireo. Manoloana izany indrindra, nisy ny atao hoe “opération de ratissage” nataon’ny polisy misahana ny ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina, afakomaly antoandro. Niainga avy amin’ny loharanom-baovao iray no nahafantaran’ny polisy momba ny fisian’ity trano fifohana sy fivarotana zava-mahadomelina. Tovolahy maromaro no indray niditra tao amin’ilay trano notondroin’ireo olona teo an-tanàna. Nanaraka avy aoriana koa ny polisy ka tovolahy miisa valo no hita tao ka mpivarotra rongony ny iray amin’izy ireo. Mbola teo am-pifohana rongony kosa ny fito hafa, tamin’io fotoana io. Nandritra ny fisavana ny trano nataon’ny polisy no nahatrarana rongony miisa 19 fonosana. Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy no nahalalana azy ireo fa tsy mbola ampy taona ny iray amin’izy ireo, mpianatra kosa ny roa ary efa miasa kosa ny efatra ambiny. Niaiky ny zavatra nataony avy izy ireo nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy.J.CL’article “Opération de ratissage” – Betongolo: mpifoka rongony valolahy tratra tao amin’ny “Ghetto” a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo: goavana ny tetikasa apetraka any atsimo
Marolafy ny tetikasa apetraka any atsimo hiadiana amin’ny kere mivaivay any an-toerana. Hisy ny tetikasa goavana hamatsiana rano sy hamokarana ahafahan’ny mponina mivelona.Fantatra, nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo, fa hapetraka ny laminasa maharitra sy mirindra hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon’ny Nosy. Hatao ny « caryographie » ho an’ireo olona sy ny faritra tena voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo ireo.Hapetraka, ny 22 oktobra izao, ny « centre de réhabilitation nutritionnelle intensive et médicale », tafiditra ao anatin’ny tetikasa fohy ezaka. Hisitraka izany ny ao Ambovombe, ny ao Tsihombe, ny ao Ampanihy, ny ao Beloha ary ny any Amboasary Atsimo.Hapetraka koa ny « banque alimentaire » na ny tobin-tsakafo hamatsiana ny mponina amin’ny mosary. Am-perinasa ireo dokotera mandray an-tanana ny marefo. Misy ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana sy ny fanafody fitsaboana hanarenana sakafo ireo tena voa mafy.Tsy maintsy tafapetraka ny 22 oktobra izao koa ny toerana handraisana ireo mponina iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mivaivay an-toerana ka hanaovana fanaraha-maso manokana mandra-pahasalama azy afaka miasa sy miatrika ny fiarahamonina.Tafiditra ao anatin’ny tetikasa antenantenan’ezaka kosa ny famaritana ny toerana hamindrana ireo mponina sy ny hametrahana ireo tetikasa rehetra handresena ny kere any atsimo. Hisy koa ny fametrahana toeram-piofanana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana.Tsy maintsy hisy ny fametrahana sekoly ho an’ny ankizy sy ny toeram-pitsaboana CSBII any amin’ireo tena sahirana hanara-maso ireo mponina, indrindra ireo nahavita ny fanarenana sakafo.Hapetraka ny ozinina mpamokatra rano madioHo an’ny tetikasa lavitra ezaka, hanaovan’ny fanjakana fanamby any atsimo koa ny hametraka ozinina mpamokatra rano madio fisotro ho an’ny mponina. Ankoatra izany ny ozinina mpamokatra sakafo azo ahodina toy ny vita amin’ny katsaka sy ny raketa mena ary ny vahona…Heverina indrindra ny hametrahana toeram-pambolena voatokana anaty « serre » ho an’ny mponina any atsimo. Tanjona ny hampanatonana ny faritra ireo renirano ahafahana mamatsy ny fambolena.Tatiana AL’article Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo: goavana ny tetikasa apetraka any atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Nifandona teny amin’ny lalam-pirenena fahafito, teny Ambatofotsy ny fiara iray marika « Mercedes Sprinter » sy fiara tsy mataho-dalana iray, omaly antoandro. Simba ny lohan’ny fiara roa tonta. Nieren-doza ireo mpandeha tao anatiny. L’article Fifandonana fiara est apparu en premier sur AoRaha.
400 afakomaly, tafakatra 624 omaly: tsy mitsaha-mitombo ireo tratra tsy manao arovava
Izay iray alehany na ny sazy hampiharina no maivana loatra, na ny olona mihitsy no mafy hatoka tsy miraharaha.Raha nisy 400 latsaka, afakomaly, nahatratra 624 indray, omaly, ireo olona tratran’ny polisy teto an-drenivohitra tsy nanao arovana ka nampanaovina ilay hoe “asa ho amin’ny tombontsoan’ny maro”. Miteny ho azy ny tarehimarika. Tena tsy mivaky loha amin’ny fanarahana fepetra amin’ny tokony hanaovana arovava, hiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 mihitsy ny ankamaroan’ny olona, na teo aza ny fampitandremana nataon’ny prefektioran’ny polisy sy ny governoran’ny faritra Analamanga.Na eo aza anefa izany, nanohy ny asany ihany ny polisy. Nasaina nanao fanadiovana ireo biraom-panjakana eto an-drenivohitra indray ireo olona tratra. Ireo tsy nahazo kifafa hamafan-dalana, nasaina nikarakara zaridaina, nanala bozaka amin’ireny faritra maitso ireny. Nisy koa ireo nobaikoina hitsimpona poti-taratasy, fonon-tsakafo nisy nanary teny an-dalambe rehetra teny.Raha izao fahamaroan’ny olona tratra tsy manaraka fepetra amin’ity fanaovana arovava hiarovana ny fihanaky ny valanaretina covid-19 no mbola mitohy, tsy tokony hahagaga mihitsy raha hiverina hanao tampody fohy indray ity areti-mandoza ity. Hiverina manaraka izany indray koa ny fampiharana ny fahamehana ara-pahasalamana, ny fihibohana… Sy ny olana ara-tsosialy, ara-toekarena haterak’izany. Nahitana hetsika fisavana arovava toy izao manerana ny boriborintany valo teto an-drenivohitra.Henintsoa Hani sy J.CL’article 400 afakomaly, tafakatra 624 omaly: tsy mitsaha-mitombo ireo tratra tsy manao arovava a été récupéré chez Newsmada.
Fahavakisan’ny fonjaben’i Farafangana: roa volana aty aoriana, mbola misy gadra 16 miriaria
Tra-tehaky ny zandarimaria ao Etroketroky, ny alarobia teo, i Zemela na i Iaban’i Zamisy, isan’ireo gadra tafatsoaka sy karohina fatratra. Raha ny tatitra voaray avy amin’ny Zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao, avy amin’olona tsara sitrapo ny nahafantarana ny toerana niereny sy nahafahana nisambotra an-dralehilahy. Taorian’ny fahavakisan’ny fonja, misy ny mari-pankasitrahana mitentina 2 tapitrisa Ar isaky ny gadra atolotry ny mpitandro filaminana sy ny minitseran’ny Fitsarana ho an’ireo manome vaovao mahakasika ireo gadra tafatsoaka.Tsiahivina fa 88 isa ireo gadra nitsoaka ny fonja ny 23 aogositra lasa teo. 48 ireo voasambotra ary 24 ireo lavo nandritra ny fitsoahana. Taorian’izay, gadra 17 mbola niriaria teny rehetra eny. Ankehitriny kosa, 16 ireo mbola atao hazalambo.Henintsoa HaniL’article Fahavakisan’ny fonjaben’i Farafangana: roa volana aty aoriana, mbola misy gadra 16 miriaria a été récupéré chez Newsmada.